I-Matrox Monarch Edge inceda abasasazi ukuba basasaze umxholo ongcono kwiVidiyo yeVidiyo -I-NAB bonisa iiNdaba ngoSasazo lweBeat, Umsasazi oMiselweyo woNAB bonisa-NAB BONISA uLUPHE
ikhaya » Okufumaneka » I-Matrox Monarch Edge inceda abaSasazi ukuhambisa umxholo weVidiyo ebukhoma
Indlela eboniswa ngayo umxholo wevidiyo kwaye ifakwe kwikhowudi ibalulekile, ngakumbi xa kusebenza kakuhle kwaye kulula ngakumbi njengoko iimfuno zekhwalithi ephezulu yomgangatho ziyaqhubeka zisanda. Iingcali zosasazo ziyayazi le nto, kwaye ngetekhnoloji ye-encoding ivela ngokukhawuleza njenge-4k, kunokuphela ikamva lezithembiso kwishishini losasazo kunye neendlela umboneleli wemveliso yevidiyo ezifana Matrox iphembelela ukuqhubela phambili kwayo. Xa kuziwa ekuhambiseni amandla angenakuthelekiswa nanto kunye nokubanamandla okubhalwa kobubanzi obunamandla obubanzi be-H.264 codec, uMatrox uye waba yintshatsheli ngexesha lakhe njengomnikezeli weemveliso zevidiyo ekumgangatho ophezulu kwiminyaka eyi-35 edlulileyo. Inkcubeko yeMatrox ibisoloko iqhutywa ukuba iphumelele kwaye inyuselwe kwicandelo eliphambili lobugcisa. Ukusukela kwi-1976, inkampani iphumelele kwisakhono sayo sokuvelisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu kubachwephesha bevidiyo kunye nabasasazi, njengoko iqhubekile nokutshintsha nokuvela ngokuhamba kwexesha. Ekuqaleni kuka-Epreli apha 2019 NAB Bonisa, UMatrox ubonakalise incopho yempumelelo yakhe ngokutyhilwa kwe encoder yabo yakutsha nje yewebhu, eyabaxhobisa kakuhle Imveliso ye-NAB 2019 yoNyaka kwiMveliso ekude kunye neBest of Show Winner.
Lo nyaka we-2019 NAB Bonisa Ingqineke ingumboniso omangalisayo, njengokuba uMatrox etyhilwa I-Monro yeMonro ye-Matrox, 4K / Multi-HD ukusasazwa kwewebhu kunye nokuveliswa kwemveliso okude. Le encoder ibonelela abasasazi ngamandla, i-low-latency, kunye namandla ashukumisayo e-H.264, efakwe kumatshini compact, amandla asezantsi, kunye nesixhobo esiphathwayo. Yintoni eyenza le encoder isebenze kakuhle kukuba inceda abasasazi ukuba bahambise umxholo owahlukileyo kunye nokunyanzelisa umxholo obukhoma ngokusebenzisa kwayo ireyithi ephezulu ye4K (HFR), 4K 360 VR, kunye nokukhethwa kweekhamera ezininzi. Ngamagama alula, i-Monarch EDGE ivumela ababoneleli bomxholo ukuhambisa amava obalaseleyo we4K yamava.
INDLELA ye-Monarch Edge Iyiphucula Njani Usasazo lweVidiyo
UMphathi weNtengiso weTekhnoloji ye-Matrox
Umda weMonarch ngokuqinisekileyo uzise ubuchule obuninzi bobugcisa ngaphakathi kwewebhu kunye nokusasaza, kwaye oku kuboniswe kakuhle kwi-2019 NAB Bonisa. Umsebenzi we-Monarch Edge wachazwa ngumphathi wentengiso wezobuchwephesha, UDan Maloney. Ngelixa limele I-Matrox kwi2019 NAB Bonisa, UMaloney uxele indlela njenge-encoder, i-Monarch Edge ayilungelanga kuphela ukukhawuleza kwezemidlalo, kodwa indlela igalelo layo lesine (i-12 sgi, ezintathu ze-3gsdi) zinokuthi zixhome umjelo we-4k 60 epheleleyo okanye kumda ophakathi Imo yeekhamera ezininzi ezingafaniyo nemijelo ebanjwayo youtube live iimeko. Oku kuya kuvumela nawuphi na umbukeli ukuba abukele umxholo kwi-engile ethandekayo ngaphandle kweekona ezine ezifumanekayo encoder iya kubenza bakwazi ukujonga umxholo obukhoma.
Ukuxoxa ukusuka kwicala elikude lokuvelisa, uMaloney uthethe malunga nendlela iMonark Edge eyisebenzisa ngayo imijelo emininzi, ngokuyintloko nge4: 2: 2 10 bit Broadcasting, inokwenza lula indlela yosasazo yokufumana umxholo ekumgangatho ophezulu kwaye inciphise isidingo I-b-van (yokusasaza i-van). Ngokusisiseko, ukuba ifameraman ibiya kuhamba kwaye ibukele imiboniso bhanya-bhanya yomnyhadala womdlalo, ke banokuphuma ngaphandle kwindawo, bangene kwimxholo wefilm, kwaye bayithumele ngqo kwi studio ukuze kwenziwe imveliso kude umxholo ofanayo.
Ininzi into esinokuxoxa ngayo xa kuziwa kwihlabathi losasazo kunye noxinzelelo lwe-4k olusebenze kuphela ukuvela. Usasazo lwevidiyo luqhutywa ngenguquko engaphaya kokutshintsha njengoko izinto ezintsha zenza abasasazi ukuba bahlengahlengise indawo ebanzi yeendlela ezijolise ekubandakanyeni umxholo ongcono, kunye nolwazelelo lokufumana nokuqhubeka ukusasaza kumjelo obanzi ukusuka kwii-angles ezininzi. Ukufakwa kwe-Matrox Monarch Edge kuvumele ukufakwa kwe-4K kumaxabiso aphezulu esakhelo (i-50 okanye i-60 fps), ngelixa i-OVP isingatha nakuphi na ukwehla okungafunekiyo. Kungenxa yolu hlobo lobuchwephesha bokusebenza okwenze ukuba uMatrox akwazi ukuzithatha zombini Imveliso ye-NAB 2019 Yonyaka kuNyaka wemveliso ekude kunye neBalaseleyo yeBonisa i-Winner kunye ne-InfoComm 2019.
Ngolwazi oluthe kratya malunga neMatrox kunye neMoney Monge, emva koko Cofa apha ukufunda ngakumbi malunga nokuba kutheni i4K / Multi-HD I-encoder yeWebcasting / iMveliso ekude yeMveliso yenza ukuba iMatrox ibe ngumthombo omkhulu wokuhambisa ividiyo ngomxholo kubasasazi.
I-NAB bonisa iNqaku lePodcast leNew YorkUnveils kunye neZithuba zePodcast eziKhethekileyo - Oktobha 13, 2019
Ukucacisa kweComment / ye-FreeSpeak Edge Iya kuSebenza kwi-NAB Bonisa iNew York - Oktobha 5, 2019
Uphando olutsha lweDesika entsha / Umlawuli ugqibelele ekuDalweni kweZitrato ze-IPTV - Oktobha 4, 2019
2016 NAB Bonisa I-2016 NAB Bonisa i-Job Fair 2016 NAB Bonisa iindaba 4K Izabelo zoBasazo Umagazini we-Broadcast Beat KwiNkomfa yabasasazo KwiNkomfa yoSasazo Encoder H.264 ikhowudi Ividiyo ekumgangatho ophezulu IMATROX Isongelo senkosi I-angle ezininzi NAB NAB 2015 NAB 2016 nabonisa i-2019 NAB16 nabshow	2019-08-26
Previous: I-Cooke Optics ivula indawo yaseTshayina ukuqhubela phambili inkxaso yamazwe aphesheya
next: I-MOD ihambisa i-VFX yabonyulwa be-VMA